लाहुरे र लाहुरेनिलाइ गा’उलेले फु’लमाला ल’गाएर स्वा’गत ग’रे हेर्नुहोस भिडियो। – Krazy NepaL
February 5, 2021 854
कन्चनलाइ हेर्न नेपालकै टप डाक्टर चितवनमा, डाक्टर सगै निरु पुगिन आइ’सियुमा (भिडियो सहित) चितवन । कञ्चन तिमील्सीना जो यतिबेला आधा शरीर प्यारालाईसिस भएर अस्पतालको बेडमा पल्टि रहेका छन् । उनै कञ्चनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनकोलागी नेपालकै टप मध्यका डक्टर घनश्याम कंडेल यतिबेला चितवन अस्पतालमा पुगेका छन् ।
तर जब कञ्चन खतरमुक्त भए तब उनी कसैले पनि नसोचेको रोगको दिर्घकालीन् बिरामी हुन पुगे । पुरै २३ दिनपछि कञ्चनको होस् त आयो तर उनी चल्न भने सकेनन् । उनका दुवै खुट्टाले काम गर्न छाडेको छ । डाक्टरको भनाई अनुसार यो वि ‘ष’को डो’ज धेरै भएको हुनाले असरले भएको हो । उनै कञ्चनकोलागी भनेर यतिबेला चितवनमा डा. घनश्याम पुगेका छन् । डा. घनश्यामको भनाई अनुसार कञ्चनलाई निको हुन कति जति समय लाग्छ होला त ?
Nextछोडेर गैइहाल्यौ स्मिता भन्दै रोए लाहुरे राहुल , कस्तो वियोगान्त कथा रच्यौ नि भन्दै सारा नेपालीको आखामा आसु ( भिडियो हेर्नुहोस